Gịnị bụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri? - Ụlọ Ịsa Ahụ
iphone 7 na -akwụsị verizon ọrụ
kedu ihe kpatara iphone ihuenyo m ji acha odo odo
kedu ihe mere batrị ekwentị m ji na -anwụ ngwa ngwa
Kedu ihe bụ Tub nke Ogige? - Ntuziaka ụlọ ịsa ahụ
Nkọwa tub ubi .Tupu anyị ekwuo ihe tubs abụrụla taa, ka anyị bido site n'ikwu maka ebe ha siri bịa . Gịnị bụ akụkọ n'azụ echiche a?
Kedu ihe kpatara eji akpọ ya tub tub?Anyị nwere ike chọta ebe ahụ mmalite nke tub tub laghachi na Narị afọ nke 18 Europe na kpọmkwem ka France . N'oge ahụ, ọgaranya ndị aristocrats nke nwere nnukwu ụlọ na ọtụtụ ala arụnyere buru ibu na okpokoro ịsa ahụ okomoko n'ime ha ubi ka ha wee nwee ike ịsa ahụ na mpụga nke okike.
Ndị bekee wee were echiche ahụ wee malite ịwụnye ha n'ime ụlọ na -eleghara ubi ha ma ọ bụ okirikiri ala ndị ọzọ mara mma - ikekwe n'ihi ihu igwe a na -atụghị anya ya nke mere ka ọ ghara ịdị mfe ịnwe ịsa ahụ na -adịgide adịgide n'èzí!
Mgbe m nụrụ igwe ịsa ahụ, m na -eche maka ọwa miri emi nke na -atọpụ iche na nke ịsa ahụ, ka Krista Watterworth Alterman, Onye isi okike nke KRISTA + ụlọ Ime ụlọ n'ime Palm Beach Gardens, Florida. Ebe a na -adọba ahịhịa siri ike ma buru ibu nke ga -emikpu ahụ gị kpamkpam.
Ogige tub na ọkọlọtọ ọkọlọtọ
Nke kachasị mkpa bụ na tub nke ubi na-ebuwanye ibu ma dịkwa omimi karịa ịsa ahụ nke ọma, n'ihi atụmatụ oval ya, na-eme ka ọ buru oke ibu, na n'ụzọ dị otu a, na-achọ oke ohere iji rụpụta ya-ọtụtụ ụlọ nwere ike. t obibi. Na agbanyeghị nha ya siri ike, atụmatụ n'ozuzu ya na -egbochikwa ọtụtụ ụzọ ịsa ahụ na ya dịka ọtụtụ ịsa ahụ taa.
N'ikpeazụ, ọnụahịa maka tub nke ubi dị iche na niche ọkọlọtọ ma ọ bụ ịsa ahụ na -ejikọtaghị ọnụ na -adịkarị elu nke ukwuu, na -enwe oke njupụta n'ozuzu ebe. $ 3000-5000 , nke a na -enweghị mmefu nke nguzobe. Dị ka a na -achị, enwere ụlọ ịsa ahụ plastik nke enwere ike ịnweta gburugburu $ 500-1,000 , agbanyeghị, ndị a ga -adịcha mma, ebe ihe anaghị ejigide okpomọkụ nke ọma, ọ ga -adịkwa obere ike, na -eme ka ị nwekwuo ego maka nnọchi ogologo oge.
Ogige ubi na -akwụ ụgwọ maka ihe ọjọọ ndị a site na inwe oke mmiri zuru oke iji mee ka mmadụ dị ala ma wedata ya kpamkpam, na -eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma karịa n'inye mgbapụta miri emi karịa nke ịsa ahụ nke n'ozuzu ya, enweghị oke mmiri. nkwanye ùgwù maka ime ihe. Nke a na -egosi na ọ na -enye aka maka ndọtị mmiri ma ọ bụ izu ike, n'ihi na ọ na -eme ka ọnọdụ ihu igwe dị iche na nke ịsa ahụ gị.
Ogige Ogige Ọgbara ọhụrụ
Bathlọ ịsa ahụ n'echiche ha taa bụ tubs na -enweghị mmiri ịsa ahụ, nke yiri nnukwu tubs miri emi, mana etinyere n'akụkụ windo foto. Tubs na jacuzzis ndị e wuru na mpụga ụlọ bụ ụdị ọfụma kachasị mma nke tub nke ubi n'agbanyeghị usoro ụgbọ mmiri ọgbara ọhụrụ.
Kedu nkọwa ndị ọzọ nke ịsa ahụ nwere ike ịdị?
Ụlọ ịsa ahụ bụ nnukwu mmiri, ka Julia Leigh Sergeon, onye nchoputa na onye nrụpụta ihe, The Camp NYC na -ekwu. Kemgbe ụwa, a na -edebe ya n'èzí ma ọ bụ n'akụkụ windo ka enwere ike ịnụ ụtọ echiche n'okpuru ịsa ahụ.
Alterman kwetara ịgbakwunye na ụfọdụ ndị mmadụ ga -eji okwu ahụ maka tub nke windo gbara ya gburugburu na -ele ogige ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ya bụ, okpokoro ịsa ahụ n'akụkụ nkuku.
Kedu ihe ụfọdụ dị na atụmatụ ịsa ahụ ogige?
Bathlọ ịsa ahụ ogige bụ n'ozuzu oval, freestanding na nnukwu - ha abụọ sara mbara na miri karịa ọkọlọtọ ịsa ahụ, ka Alterman na -ekwu.
Size bụ kacha dị mkpa atụmatụ, Sergeon kwuru: Ọtụtụ ndị okenye ahụmịhe nke ha agbatiri omimi na ergonomic okirikiri nhọrọ ukwuu nke ahụ na -eme ka ọ ghara ịdị ogologo oge.
Kedu ụdị ihe eji eme ha?
Omenala, ogige a na -asa ahụ eke ihe, Sergeon kwuru: Ndị a gụnyere osisi na ibu nke okwute nhọrọ , nke gụnyere granite na marble. Ụbọchị ndị a, kachasị nkịtị n'ime ahịa bụ poselin enameled ihe nkedo ígwè.
Onye na -eme ihe nkiri na -enye na e nwekwara uzo ozo maka resin nkume, acrylic, na plastik - ebe rọba bụ nke dị ọnụ ala.
Olee otú nnukwu bụ a tub tub?
Akụkụ tub nke ogige :
Ebe ịsa ahụ nke ogige dị ọtụtụ buru ibu karịa masịrị ịsa ahụ, nke bụ n'ozuzu 60 sentimita ogologo , 30 sentimita n'obosara, na 19 sentimita miri emi , mana ha dị na nha .
Ụdị ogige tub jikoro 60 sentimita ogologo , 42 sentimita asatọ n'obosara, na omimi 24 . NA ogige ịsa ahụ bụ n'ozuzu opekata mpe 60 sentimita ogologo na ebe ọ bụla site na sentimita 24 ruo sentimita 36 n'omimi .
Kedu ụdị ọkpọkọ nwere bath bath Garden?
Ebe ịsa ahụ na -anọkarị nkịtị dabara na ala- arụnyere dịanyā, dabere na Onye na -eme nri, agbanyeghị mgbidi- melite mpe mpe akwa dịkwa otu a nhọrọ.
Ị Kwesịrị Ịwụnye Bathtub nke Ogige?
Mee ụfọdụ ị na -eme atụmatụ kpachapụ anya tupu ịzụ ahịa maka na ogige ịsa ahụ . Nyere nha na udi nke a ahịhịa tub , buru n'uche otutu ihe tupu wụnye ọ.
Ụlọ ịsa ahụ dị oke ọnụ nke ukwuu ọbụna tupu echichi ya, a na -agụtakwa ọrụ ọkpọkọ.
Ọnụahịa ọkọlọtọ maka ebe ịsa ahụ na -amalite site na USD 2,000, nke nwere ike ịbawanye dabere na ihe na nha ị họrọ. Site na nrụnye na pọmpụ, ọnụ ahịa ọkọlọtọ maka ịsa ahụ ubi nwere ike iru USD 5,000.
Ogige ubi na -ewe ọtụtụ ohere, nke bụ ihe ị kwesịrị ịtụle maka nha. Ọ dịkwa mkpa ka ị chee maka obosara ọnụ ụzọ ahụ ka ndị ọrụ ga -ebubata tub ahụ tupu ha etinye ya na ime ụlọ ịsa ahụ.
Nhazi ụlọ ịsa ahụ
Ọtụtụ ụlọ ịsa ahụ nwere isi mmiri ịsa ahụ n'elu nnukwu ụlọ ịsa ahụ ha, nke na -enyere aka ịchekwa oghere n'ime oghere dị warara. Agbanyeghị, nhazi a adịghị mma maka tub nke ubi. Ị ga -achọ oghere dị iche maka mpaghara ịsa ahụ. Ọ ga -adịrịrị na akpa ahụ ka ọ ghara ịgbasa.
Mgbe ị na -atụle ọnụ ahịa, nha, na nhazi, ị nwere ike chọọ iche maka akụkụ ndị ọzọ, dịka akụrụngwa na ụdị.
Bathlọ ịsa ahụ nke ogige dị mma maka gị?
Ọ bụrụ na ị gụọ nke a ma chọpụta na echiche ahụ na -atọ gị ụtọ, ị nwere ike ịnọ na -eche ma ịsa ahụ ịsa ahụ nwere ike ịbụ nhọrọ maka gị. Ka anyị lee nke a ugbu a.
Ihe mbụ ị ga -echebara echiche bụ nha ụlọ ịsa ahụ gị, ebe ịsa ahụ chọrọ nnukwu oghere. Ọ bụrụ na ịnweghị ịsa ahụ buru ibu, ị nwere ike hapụ echiche nke ịsa ahụ n'ihi na ọ baghị uru.
Cheta, ọ bụ tub na-akwụghị ọtọ nke ga-achịkwa oghere. Ọbụlagodi na ị nwere oke nha dabara ha, ọ bụrụ na akwa ịsa ahụ gị buru oke ibu maka ohere, ọ ga -eme ka ụlọ ịsa ahụ gị dị mkpagide. Nke a abụghị mmetụta dị oke egwu, nke okomoko ịchọrọ ịmepụta.
Ihe ọzọ ị ga -atụle bụ ego. Naanị ịzụta ịsa ahụ n'onwe ya ga -eweghachi gị opekata mpe ọtụtụ puku dollar, mana mgbe nke ahụ gasị, ịkwesịrị iche maka imepụta gburugburu ebe kwesịrị ekwesị n'ime ime ụlọ ịsa ahụ, ọ ga -efu ọnụ karịa.
Mgbe ahụ enwere eziokwu dị mfe na ịnweta ịsa ahụ na -akpaghị aka n'ihi oke ibu pụtara na ụgwọ mmiri gị na -arị elu. Okpokoro ubi abụghị nhọrọ mmefu ego.
Ebe a na -asa ahụ dị mma maka ndị na -enwe ọ theụ iji ogologo oge zuru ike na gburugburu ebe dị jụụ n'ime nnukwu tub nke nwere ohere ịwụnye otu na onye na -achọghị ịma itinye ego ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọ ka mma ịtụle nhọrọ ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị na -achọ mkpali, lelee vidiyo a nwere ọtụtụ echiche maka ịsa ahụ na tubs ị nwere ike chọọ ịtụle.
Inwe nnukwu akpa ga -eme ka ịsa ahụ mgbe niile bụrụ ọmarịcha ahụmịhe okomoko. Ebe ịsa ahụ nke ogige dị n'ụdị dị iche iche, agba na ụdị.
Ị ga -etinye ego na nrụnye, ụgwọ tub, yana atụmatụ pụrụ iche. N'agbanyeghị ọnụ ahịa dị oke ọnụ (ọbụlagodi maka obere tub), ịnwe okpokoro ịsa ahụ na ogige bụ ahụmịhe kwa ụbọchị nke ga -eme ka ndụ gị ka mma.